Baolina lavalava – Hiady toerana iray ny Savonnerie sy FTM ary TFMA - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Baolina lavalava – Hiady toerana iray ny Savonnerie sy FTM ary TFMA
Efa manomboka misongadina ireo ekipa hiatrika ny manasa-dalana sy lalao sakana amin’ny fiadiana ny ho tompon- dakan’Analamanga eo amin’ny baolina lavalava diviziona voalohany na ny «Top 14». Hatramin’ny andro faha-12 dia ny 3FB sy ny Iarivo Rugby club no efa azo antoka fa tafita avy hatrany amin’ny dingan’ny manasa-dalana. Ekipa telo kosa no efa fantatra amin’ireo hiatrika ny lalao sakana hahafahana miditra ao amin’io dingana io, dia ny Cosfa, Tam ary Uasc. Mbola mila miady mafy kosa hahafahana maka toerana iray eo amin’ny lalao sakana ny Savonnerie sy FT Manjakaray ary ny Tfma.
Efa fantatra ihany koa ireo ekipa roa hidina any amin’ny diviziona voalohany elita faharoa amin’ny herin- taona : ny Club Printanier d’Isotry (CPI) sy ny FiT Manjakaray na ny FTM 2 fahiny.
Mbola ady hafa kosa ny an’ny US Ikopa sy ny US Ankadifotsy mandritra ny lalao hifanandrinan’ izy ireo amin’ny Cosfa sy Uasc, izay efa miandry lalao sakana sisa. Aorian’ izay dia ho voafaritra ireo ekipa valo hiatrika ny «Top 8» na ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara.
« Airtel jeunes talent » – Hifantina ankizy 16 ho any Nizeria ny Airtel sy ny Génération(0)
Hiditra amin’ny andiany fahatelo sahady ny fifantenana ireo mpilalao hisolo tena ny Airtel Madagascar ho any Lagos (Nizeria) amin’ny volana septambra 2013 ho avy izao. Hotontosaina amin’ny 8 jona hatramin’ny 22 jona ho avy izao izany fifaninana handraisan’ireo ekipana ankizy latsaky ny 17 taona, eny amin’ireo sekoly eto Antananarivo sy ny manodidina izany. Ny 8
Taxi foot – Ireo lalao enina ho hita rahampitso sabotsy(0)
Hitohy rahampitso sabotsy ny « Grand Tournoi Taxi Foot », karakarain’ny Fiteramana, eny Fort Duchesne. Lalao enina no ho hita ka manomboka amin’ny 11 ora ny lalao voalohany. Kitra lalaovin’olona fito ity hihaonana ity. Omby no iadiana amin’izany. Toy izao manaraka izao ny fandaharan-dalao: 11ora : Taxi Gara Ampasampito # Taxi FC3A Cora 12ora : Taxi Ambodivona # Taxi
«Champions league» – Hihaona amin’ny Bayern ny Dortmund tsy misy an’i Mario Götze(0)
Tsy isan’ireo hiatrika ny lalao famaranana eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa, izay hotontosaina amin’ny sabotsy izao any amin’ny kianjan’i Wembley (Angletera), i Mario Götze, isan’ireo andrin’ny Borussia Dortmund. Na izany aza anefa dia mbola henjana ho an’ny Bayern Munich ny hitady fandresena eo anoloan’ny Dortmund. Tamin’ireo lalao mandroso sy miverina ho an’ny fiadiana
«Defi froid» – Hitsapa ny hatsiakan’ny rano ireo mpilomano eny Betongolo(0)
Hifanandrina amin’ny hatsiaka eny amin’ny dobo filomanosan’i Betongolo amin’ny sabotsy izao ireo mpilomano hanoina ny antson’ny klioba Cosfa lomano. “Natao indrindra hitsapana ireo mpilomano te hiditra ho ao anatin’ny klioba izy ity ary ihany koa hanamafisana sy hitsapana ny toe-tsain’ireo mpilomano”, hoy i Tojohanitra Andriamanjatoarimanana, mpilomano kalaza fahiny, mpikarakara ity “Challenge Defi-Froid” ity. Saika ireo
Basket ball N1A – Hanandran-tsira any Mahajanga ny ekipan’ny Zandary(0)
Henjankenjana ny lalana miandry ny ekipan’ny zandarimariam-pirenena (GNBC), izay sambany no hiatrika fifaninanana goavana, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, ho an’ny basket ball sokajy N1A. $Tafara-bondrona amin’ny Sebam sy ny Ascum, izay samy ekipa avy any amin’iny faritr’i Boeny iny izy ireo, amin’ny fifaninanam-pirenena mandroso hotontosaina, any Mahajanga amin’ny 1 – 9 jona
Baolina lavalava, Mpanoratra Rijakely, 21.09.2012, 09:41	FIARAHAMONINA